फेसबुक, ट्विटर र गुगल को सुरक्षा निर्देशक राजीनामा | ग्याजेट समाचार
टेक कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्तम हप्ता पाइरहेका छैनन्। फेसबुक र क्याम्ब्रिज एनालिटिका कांड, जसको हामीले तपाईंलाई सबै कुरा बताएका छौं यहाँ, आजको दिन क्षेत्रलाई हल्लाउँदैछ। सामाजिक नेटवर्क मा संकट उल्लेखनीय छ, र मार्क जुकरबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका मा ब्रिटिश संसद र कांग्रेस समक्ष गवाही दिनेछ। तर कम्पनीको नतिजा आउन लामो समय सम्म भएको छैन.
न केवल तिनीहरूले शेयर बजार मा लाखौं गुमाएका छन् (अहिले सम्म ,50.000०,००० मिलियन डलर भन्दा बढी)। साथै फेसबुकका मुख्य सुरक्षा अधिकारीले राजीनामा गरेको छ। यस घोटालाको परिणामस्वरूप एलेक्स स्टैमोसलाई उनको पद छोड्न बाध्य गरिएको छ।
एक निर्णय जुन सामाजिक नेटवर्कले अनुभव गरिरहेको स्थितिलाई विचार गरेर तार्किक देखिन्छ। तर सबैको सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यो केवल एक मात्र थिएन। दुई अन्य प्रविधि कम्पनीहरूले देखेका छन् कि उनीहरूका सुरक्षा निर्देशकहरूले यस हप्ता तिनीहरूको स्थान छोड्छन्. के भइरहेको छ?
यो सबै एलेक्स Stamos को राजीनामा संग शुरू भयो, फेसबुक प्रमुख सुरक्षा अधिकारी। उहाँ सिद्धान्त र महान निष्ठा को मानिस को रूप मा परिचित छ। उसको दिनमा उसले याहू छोडे किनभने त्यहाँ गोप्य प्रोग्राम थियो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दियो सरकारको प्रयोगकर्ताको ईमेलमा पहुँच थियो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समयको बखत, उहाँ प्लेटफर्मले विस्थापन अभियानमा यसको प्रभाव र शक्ति व्यवस्थापन गरेको तरिकाको आलोचनात्मक थियो। Stamos संगठन भित्रका व्यक्ति थिए जसले रूसी हस्तक्षेप स्पष्ट पार्न चाहान्थे। यो फेसबुक मा राम्रोसँग तल गएको देखिदैन। र उनको राजीनामा संग आन्तरिक दबाव समाप्त भयो।
Stamos को राजीनामा पछि अर्को एक आइपुगेको छ। यस अवस्थामा, यो गुगलको सुरक्षा निर्देशक, माइकल Zalewski हो।। कम्पनीको सूचना ईन्जिनियरि director निर्देशकले ट्विटरमा सन्देश मार्फत घोषणा गरे कि एघार वर्ष पछि कम्पनी छोडियो। फेसबुकमा उनका साथीले राजीनामा गरेको घोषणा गरेको केही दिन पछि।
उहाँको प्रस्थानको कारणका बारे केहि पनि थाहा छैन। त्यहाँ धेरै अनुमानहरू छन् कि यो यस डाटा चोरी घोटालासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। ट्विटरमा Zalewski आफैंमा ठट्टा गरेको केहि चीज। तर हामीले यसमा थप टिप्पणीको लागि कुर्नुपर्नेछ।
त्यसो भए, करीव ११ बर्ष पछि, म गुगलको अन्त्य हुने छु। यो रमाईलो सवारी भएको छ।
- lcamtuf (@lcamtuf) मार्च 21, 2018
तर यो यहाँ अन्त्य हुँदैन। हामीसँग ट्विटरमा एउटा अर्को ड्रप पनि छ। माइकल कोट्स, सुरक्षा को ट्वीटर को प्रमुख, भी कम्पनी बाट आफ्नो फिर्ती शुरू गर्दै छ।। यद्यपि यो अझ प्रभावकारी हुन सकेको छैन, यस्तो देखिन्छ कि केही हप्ता पहिले निर्णय भएको थियो। यद्यपि यो टेक्नोलोजी कम्पनीहरूका लागि यस जटिल हप्तामा ठीकै खुलासा गरिएको छ। उहाँको प्रस्थानको कारणका बारे केहि पनि थाहा छैन.
अहिलेसम्म कुनै पनि तीन कम्पनीले यी घाटामा केही पनि टिप्पणी गरेको छैन। यो कम रोचक छ कि फेसबुक, गुगल र ट्विटर जस्ता तीन प्रमुख कम्पनीले उहि हप्तामा उही स्थान ओगटेको व्यक्ति हराउँछ। त्यसकारण, हामी आशा गर्दछौं कि यी राजीनामाहरूका थप कारणहरू प्रकट हुनेछन्। उनीहरूले पर्याप्त शic्का उब्जाएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » गुगल, ट्विटर र फेसबुक सुरक्षा प्रबन्धकको बाहिर छ